Imibandela Nezimo | Ubumfihlo-Jikelele Corporate Services Izinkampani Inc.
HLANGANISA MANJE LLC Corp
Ukuqala kwebhizinisi nezinsizakalo zokuvikela impahla.
IMISEBENZI EWEBSITE NEMIHLAZO
Le mibandela nemibandela ilawula ukusetshenziswa kwakho kwale website; ngokusebenzisa le website, wamukela le migomo nemibandela ngokugcwele. Uma ungavumelani nale migomo nemibandela noma iyiphi ingxenye yale migomo nemibandela, akumelwe usebenzise le website.
Kufanele ube neminyaka engu-18 okungenani yokusebenzisa le webhusayithi. Ngokusebenzisa le webhusayithi futhi ngokuvuma le migomo nemibandela uyikhipha futhi umele ukuthi okungenani uneminyaka engu-18.
Le webhusayithi isebenzisa amakhukhi. Ngokusebenzisa le webhusayithi futhi uvumelana nale migomo nemibandela, uyavuma ukuthi inkampani yethu isebenzise amakhukhi ngokuya ngemigomo yenqubomgomo yobumfihlo ye-General Corporate Services / inqubomgomo yamakhukhi.
Ilayisense Yokusebenzisa Iwebhusayithi
Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela, iGeneral Corporate Services, Inc. (inkampani eyiNevada) kanye / noma abanikezeli bayo abanamalayisense basebenzisa uphawu lweCompanies Incorporate futhi banamalungelo emalungelo obunikazi bempahla kwiwebhusayithi nezinto ezibonakalayo kuwebhusayithi. Ngokuya ngaphansi kwelayisense elingezansi, wonke la malungelo obuhlakani bendawo agodliwe.
Ungabuka, ulande izinhloso zokugcina i-caching kuphela, bese uphrinta amakhasi noma okunye okuqukethwe kuwebhusayithi ukuze ukwazi ukuzisebenzisela wena, ngokuya ngemikhawulo ebekwe ngezansi nakwezinye izindawo ngale migomo nemibandela.
Akumele shicilela kabusha okuqukethwe okuvela kule webhusayithi (kufaka phakathi ukuphindwaphindwa kwenye iwebhusayithi); thengisa, uqashe noma usebenzise amalayisense amancane kusuka kuwebhusayithi; khombisa noma yikuphi okuvela kuwebhusayithi obala; ukukhiqiza kabusha, ukuphindaphinda, ukukopisha noma ukuxhaphaza okuthile kule webhusayithi ngenhloso yokuhweba; hlela noma ngenye indlela ushintshe noma yikuphi okuqukethwe kuwebhusayithi; noma usabalalise ukwaziswa okuvela kule webhusayithi ngaphandle kokuqukethwe, uma kukhona, ngokukhethekile nangokucacile okwenzelwe ukusabalaliswa kabusha.
Lapho okuqukethwe kwenziwa kutholakale ngokuqondile ukuze kusatshalaliswe kabusha, kungasatshalaliswa kuphela ngemvume ebhaliwe evela kumphathi weGeneral Corporate Services, Inc. inhlangano yeNevada.
Akumelwe usebenzise le website nganoma iyiphi indlela ebangela, noma ingabangela, ukulimaza kuwebhusayithi noma ukulimala kokutholakala noma ukutholakala kwewebsite; noma nganoma iyiphi indlela engekho emthethweni, engekho emthethweni, inkohliso noma eyingozi, noma mayelana nanoma yikuphi injongo engekho emthethweni, engekho emthethweni, inkohliso noma eyingozi noma umsebenzi.
Akufanele usebenzise le webhusayithi ukukopisha, ukugcina, ukusingatha, ukuthumela, ukuthumela, ukusebenzisa, ukushicilela noma ukusabalalisa noma yikuphi ukwaziswa okuqukethe (noma kuxhunyiwe) noma yiliphi i-spyware, igciwane lekhompyutha, ihhashi leThrojani, imbungu, i-keystroke logger, i-rootkit noma enye isofthiwe yekhompyutha enonya.
Akufanele wenze noma iyiphi imisebenzi ehlelekile noma eqoqiwe yokuqoqa imininingwane (kufaka ngaphandle kokukhawulwa komkhawulo, ukumba idatha, ukukhipha idatha nokuvuna idatha) ku noma maqondana nale webhusayithi ngaphandle kwemvume ebhalwe phansi yakwaGeneral Corporate Services.
Akumelwe usebenzise lewebhusayithi ukuze uthumele noma uthumele ukuxhumana okungavunyelwe kwezohwebo.
Akumele usebenzise le webhusayithi ngezinhloso ezihlobene nokumaketha ngaphandle kwemvume ebhaliwe ye-General Corporate Services.
Ukufinyelela ezindaweni ezithile zale webhusayithi kuvinjelwe. IGeneral Corporate Services inelungelo lokuvimbela ukufinyelela kwezinye izindawo zale webhusayithi, noma yonke le webhusayithi, ngokubona kweGeneral Corporate Services.
Uma i-General Corporate Services ikunikeza i-ID yomsebenzisi nephasiwedi ukuze ukwazi ukufinyelela ezindaweni ezivinjelwe kule webhusayithi noma okunye okuqukethwe noma izinsizakalo, kufanele uqinisekise ukuthi i-ID yomsebenzisi nephasiwedi zigcinwa ziyimfihlo.
I-General Corporate Services ingakhubaza i-ID yakho yomsebenzisi ne-password ngokuqonda okuphelele kwe-General Corporate Services ngaphandle kwesaziso noma incazelo.
Kule migomo nemibandela, "okuqukethwe kwakho komsebenzisi" kusho izinto (okufaka ngaphandle kokunciphisa umbhalo, izithombe, izinto ezilalelwayo, impahla yevidiyo kanye nezinto ezibukwayo) ozihambisa kule website, nganoma iyiphi inhloso.
Unikeza i-General Corporate Services ilayisensi yomhlaba wonke, engenakuphikiswa, engakhethi, yasebukhosini ukusebenzisa, ukukhiqiza kabusha, ukuguqula, ukuhumusha, ukuhumusha kanye nokusabalalisa okuqukethwe kwakho komsebenzisi kunoma iyiphi imidiya ekhona noma yesikhathi esizayo. Unikeza futhi kwa-General Corporate Services ilungelo lokuthola amalayisense amancane lawo, kanye nelungelo lokuletha isenzo sokwephulwa kwala malungelo.
Okuqukethwe kwakho komsebenzisi akumele kube okungekho emthethweni noma okungekho emthethweni, akumele kwephule noma yiliphi ilungelo lomthetho lomuntu wesithathu, futhi akumele kube namandla okunika izinyathelo zomthetho noma ngabe kukuphikisana nawe noma i-General Corporate Services noma umuntu wesithathu (esimweni ngasinye ngaphansi kwanoma yimuphi umthetho osebenzayo) .
Akumelwe uhambise noma yikuphi okuqukethwe komsebenzisi kwiwebusayithi noma okuye kwaba yinkinga yanoma yiziphi izinqubo ezisongelwayo noma zangempela zomthetho noma esinye isikhalazo esifanayo.
IGeneral Corporate Services inelungelo lokuhlela noma lokususa noma yini efakwe kule webhusayithi, noma egcinwe kumaseva akwaGeneral Corporate Services, noma aphethwe noma ashicilelwe kule webhusayithi.
Ngaphandle kwamalungelo weGeneral Corporate Services ngaphansi kwale migomo nemibandela maqondana nokuqukethwe ngumsebenzisi, iGeneral Corporate Services ayibophezeli ukuqapha ukulethwa kwalokhu okuqukethwe, noma ukushicilelwa kwalokhu okuqukethwe kule webhusayithi.
Le webhusayithi inikezwe "njengoba injalo" ngaphandle kwezethulo noma ama-warranties, iveza noma iveziwe. I-General Corporate Services ayenzi izethulo noma ama-waranti maqondana nale webhusayithi noma imininingwane nezinto zokwenziwa kule webhusayithi.
Ngaphandle kokubandlulula ekuveleni kwendima eyandulelayo, i-General Corporate Services ayigunyazi ukuthi le webhusayithi izotholakala njalo, noma itholakale nhlobo; noma imininingwane ekule webhusayithi iphelele, iyiqiniso, inembile noma ayidukisi.
Akukho lutho kule webhusayithi okwakha, noma okuhloselwe ukwakha, izeluleko zaluphi uhlobo. Uma udinga izeluleko maqondana nanoma iyiphi into esemthethweni, yentela, yezezimali noma yezokwelapha kufanele uthinte uchwepheshe ofanele.
Izinsizakalo Ezijwayelekile Zobumbano ngeke zikubophezele (noma ngabe kungaphansi komthetho wokuxhumana, umthetho wamathekisi noma ngenye indlela) maqondana nokuqukethwe, noma ukusetshenziswa kwe, noma ngenye indlela ehlobene nale webhusayithi:
kuze kufike lapho iwebhusayithi ingekho noma ihlinzekwa mahhala, nganoma yikuphi ukulahleka okuqondile;
noma yikuphi ukulahlekelwa okungaqondile, okukhethekile noma okulinganayo; noma
noma yikuphi ukulahlekelwa kwebhizinisi, ukulahlekelwa kwemali, imali engenayo, inzuzo noma ukulondolozwa okulindelekile, ukulahlekelwa kwezivumelwano noma ubudlelwane bebhizinisi, ukulahlekelwa idumela noma ukuthakazelelwa, noma ukulahleka noma inkohlakalo yolwazi noma idatha.
Le mikhawulo yesikweletu iyasebenza noma ngabe ngabe i-General Corporate Services yelulekwe ngokusobala ngokulahleka okungaba khona.
Akukho lutho kulo mshwana wokuzikhipha emthwalweni wewebhusayithi ozokhipha noma ukhawulele noma iyiphi iwaranti ebekwe ngumthetho ukuthi bekungekho emthethweni ukuyikhipha noma ukuyikhawulela; futhi akukho lutho kulo mshwana wokuzikhipha emthwalweni wewebhusayithi oluzobeka eceleni noma lukhawule isikweletu seGeneral Corporate Services maqondana nanoma yikuphi:
ukufa noma ukulimala komuntu okubangelwe ubudedengu beGeneral Corporate Services; ukukhwabanisa noma ukumelela kabi inkohliso ohlangothini lweGeneral Corporate Services; noma udaba okungekho emthethweni noma olungekho emthethweni ukuthi i-General Corporate Services ikhiphe noma ikhawulele, noma izame noma ifune ukukhipha noma ukukhawulela, isikweletu sayo.
Ngokusebenzisa le webhusayithi, uyavuma ukuthi ukungafakwa kanye nemikhawulo yesikweletu ebekwe kule ndlela yokuzihoxisa yewebhusayithi kunengqondo.
Uma ungacabangi ukuthi zinengqondo, akumele usebenzise le webhusayithi.
Uyakwamukela ukuthi, njengenhlangano ekhawulela isikweletu, iGeneral Corporate Services, Inc., okuyinkampani yeNevada, inentshisekelo ekunciphiseni isikweletu sabaphathi bayo kanye nabasebenzi bayo. Uyavuma ukuthi ngeke ulethe noma yisiphi isimangalo uqobo ngokumelene nezikhulu zeGeneral Corporate Services, abaqondisi noma abasebenzi maqondana nanoma ikuphi ukulahlekelwa okutholayo maqondana newebhusayithi.
Ngaphandle kokubandlulula lesi sigaba esandulelayo, uyavuma ukuthi imikhawulo yamawaranti nesikweletu esichazwe kulesi sitatimende sokuzikhipha emthwalweni kuzovikela izikhulu zeGeneral Corporate Services, abasebenzi, ama-ejenti, izinkampani ezingaphansi, abalandelayo, ukunikezela kanye nosonkontileka abancane kanye ne-General Corporate Services, Inc.
Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa kwalokhu kukhulunyelwa kwewebhusayithi kwenzeka, noma kutholakala ukuthi, akunakusebenza ngaphansi komthetho osebenzayo, lokho ngeke kuthinte ukuphoqeleleka kwezinye izinhlinzeko zalencazelo yezinga lewebhusayithi.
Ngaleyo ndlela ukhumbula izinsizakalo ezijwayelekile ze-Corporate Services bese uzibophezela ekugcineni i-General Corporate Services ibuyiselwa kunoma ikuphi ukulahleka, umonakalo, izindleko, izikweletu nezindleko (kufaka phakathi ngaphandle komkhawulo izindleko zomthetho nanoma yimaphi amanani akhokhelwa yiGeneral Corporate Services kumuntu wesithathu ekuxazululeni isimangalo noma impikiswano ngokwelulekwa ngabeluleki bezomthetho bakwaGeneral Corporate Services) okwenzeke noma ukuhlukunyezwa yiGeneral Corporate Services okuvela ngenxa yanoma yikuphi ukwephulwa kwakho kwanoma yikuphi ukunikezwa kwale migomo nemibandela, noma okuvela kunoma yisiphi isimangalo sokuthi wephule noma yikuphi ukuhlinzekwa kwale migomo futhi izimo.
Ukuphulwa kwale Migomo nemibandela
Ngaphandle kokubandlulula amanye amalungelo e-General Corporate Services ngaphansi kwale migomo nemibandela, uma wephula le migomo nemibandela nganoma iyiphi indlela, i-General Corporate Services ingathatha izinyathelo njengoba i-General Corporate Services ibona kufanelekile ukubhekana nalokhu kwephula umthetho, kufaka phakathi ukumisa ukufinyelela kwakho ku iwebhusayithi, ekuvimbela ukungena kuwebhusayithi, ukuvimba amakhompyutha usebenzisa ikheli lakho le-IP ukungena kuwebhusayithi, ukuxhumana nomhlinzeki wakho wesevisi ye-intanethi ukucela ukuthi bavimbe ukufinyelela kwakho kuwebhusayithi futhi / noma bakulethele izinkantolo.
Izinsizakalo Ezijwayelekile Zobumbano zingabuyekeza le mibandela nemibandela ngezikhathi nezikhathi. Imibandela nemibandela ebukeziwe izosetshenziswa ekusetshenzisweni kwale webhusayithi kusukela ngosuku lokushicilelwa kwemigomo nemibandela ebukeziwe kule webhusayithi. Sicela ubheke leli khasi njalo ukuqinisekisa ukuthi uyayazi inguqulo yamanje.
I-General Corporate Services ingadlulisa, isayine inkontileka encane noma ngenye indlela isebenzisane namalungelo kanye / noma izibopho zeGeneral Corporate Services ngaphansi kwale migomo nemibandela ngaphandle kokukwazisa noma ukuthola imvume yakho.
Awukwazi ukudlulisa, inkontileka encane noma ngenye indlela usebenze ngamalungelo akho kanye / noma izibopho ngaphansi kwale migomo nemibandela.
Uma ukuhlinzekelwa kwale migomo nemibandela kunqunywa yinoma iyiphi inkantolo noma elinye igunya eligunyaziwe ukungabi semthethweni futhi / noma ukungasebenzi, ezinye izinhlinzeko zizoqhubeka zisebenze. Uma noma yikuphi ukuhlinzekwa okungekho emthethweni kanye / noma okungenakuphoqelelwa kungaba semthethweni noma okuphoqelekile uma ingxenye yayo isuswa, leyo ngxenye izothathwa njengeyisuswe, futhi okunye okunye ukuhlinzeka kuzoqhubeka ukusebenza.
Le migomo nemibandela yakha isivumelwano sonke phakathi kwakho ne-General Corporate Services maqondana nokusebenzisa kwakho le webhusayithi, futhi idlulisele zonke izivumelwano zangaphambili maqondana nokusebenzisa kwakho le webhusayithi.
Le migomo nemibandela izolawulwa futhi yenziwe izitho ezihambisana nemithetho yaseFlorida, futhi noma yiziphi izingxabano eziphathelene nale migomo nemibandela zizoba ngaphansi komthetho okhethekile wezinkantolo ngaphakathi kweBroward County, eFlorida.
Ukubhaliswa kanye nokugunyazwa
Imininingwane kaGeneral Corporate Services
Igama eliphelele le-General Corporate Services yi-General Corporate Services, Inc.
I-General Corporate Services ibhaliswe ku Nevada.
Ikheli elibhalisiwe le-General Corporate Services ngu-701 S Carson St., Ste. 200, iCarson City, NV 89701
Ikheli lalo leposi lingu-23638 Lyons Ave. # 223, Santa Clarita, CA 91321.
Ungaxhumana nezinsiza ezijwayelekile ze-General Corporate nge-imeyili ku-info@companiesinc.com.
I-copyright © 2019 Companiesinc.com | Wonke Amalungelo Agodliwe